Kidsmụaka China na-agba ịnyịnya na akpa ụlọ nchekwa ihe eji ebu ụmụaka, ndị na - emepụta ihe | Faye
Har PP + Harness
Ing Gụnyere Igodo na Castors
Rmụaka Ndị Na-agba Gha
Color Agba / Mpempe akwụkwọ ahaziri iche
【3 NA 1】 Nọdụ, Dide, Nọgide; na-eme ka ụmụ gị na-atụrụ ndụ n'ọdụ ụgbọ elu, ebe ha na-eru ma na-anọghị n'ụlọ. Ọrụ dị iche iche zutere ụmụ gị dị iche iche chọrọ igwu egwu.
Rage Ikwuru ihe ụmụaka ji egwuri egwu ọkachasị nke obere nwa gị ma ọ bụ ihe ndị ọzọ pụrụ iche na oche ebe oche maka ndị ogologo ije na-agafe gburugburu ma ọ bụ zoo. Ọrụ dị ukwuu na-enye nne na nna aka ịdọkpụ ụmụaka nwere ike gwụrụ na akpa mkpuchi ma ọ bụ buru ibu n'ofe n'enweghị nsogbu
Grade Ihe omumu ihe omumu nke gburugburu ebe obibi by Nke PP na-adighi nma dika nke puru imebi nke umuaka noo. Eriri beliti na-agbazi agbazi na-echebe ụmụaka. A na-ejikwa aka na-egosi nkata aka na-ejide nkasi obi.
【Stable 4 Wheel】 Pụrụ iche 4 wiil na-enye ihe eji achọta akwa na-agbakwunye nkwụsi ike na nchekwa. Ọ dịghị mkpa maka nguzosi ma ọ bụ ịnya na-enweghị isi. Wide oche na 4 wiil wheel-eme ka ịnya igwe ọ funụ na mfe maka ụmụaka nke larịị ọ bụla nkà. Naanị zoo ma bido ịmalite. Oche ndị dara ụda mara mma na-adị ire ma dị jụụ. Bishọp dị elu na-ebelata mkpọtụ ma mee njem dị nro.
Gift Nnukwu onyinye】 Ọ bụ ezigbo onyinye maka ụbọchị ọmụmụ ụmụaka gị, ekeresimesi! Nye ụmụ gị obere skooter / na-agba ịnyịnya! Ha ga-enwe mmasị n'ịnyịnya egwuregwu nke ha. Adabara ụmụ nwoke na ụmụ agbọghọ si afọ 2-7.
Nke gara aga: Furniturelọ Ngwurugwu idlọ Na-ahụ Maka Kidslọ Ngwá Ngwakọta ụmụaka
Osote: Rmụaka na-agba ịnyịnya na ibu
Rolmụaka na-akpọrọ Rolling
Scmụaka Akara Scmụaka
Rmụaka na-agba ịnyịnya na ibu
Rmụaka na-eburu akpa nchekwa akpa ụmụaka